Maitiro ekushandura mitambo yeLinux kuita flatpak mapakeji | Linux Vakapindwa muropa
Iyo flatpak fomati iri kurova zvakaoma, zvirinani zvishoma kusimba pane snap mapakeji. Munguva pfupi yapfuura, mugadziri weprojekti akaburitsa script ichatibvumidza kuti tigadzire flatpak package kubva kune yeLinux mutambo simaki. Saka tinogona chinja chero mutambo weLinux kuti uve wepasirese fomati uye ugokwanisa kuiisa pane chero kupi kweGnu / Linux kugovera.
Tinofanira kutaura izvozvo iyi script haina kushanda kumitambo yese, zvinongoenderana chete nemitambo yemuno yeLinux, installers inoda waini kana dosbox haina kutsigirwa. Izvi zvakakosha nekuti vazhinji venyu muchange muchida kuisa mitambo inoda Windows kutsamira kana kutsamira kunofanirwa kuteedzerwa.Kuiswa kwaro uye maitiro acho ari nyore kwazvo. Kutanga isu tinofanirwa kurodha pasi script iyo ichaita zvese izvi maitiro. Tinogona kuwana chinyorwa ichi kuburikidza ne github repository. Kana tangova nechinyorwa, isu tinofanirwa kuisunungura mune iyo imwecheteyo folda uko vanoisa emitambo yeLinux iyo yatinoda kushandura iripo. Iye zvino tinovhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera:
flatpak --user remote-add --no-gpg-verify --if-not-exists game-repo repo ( esto solo se hará una vez)
flatpak --user remote-ls game-repo ( esto revisa si el juego está disponible en los repositorios flatpak)
flatpak --user install game-repo com.gog.Call_of_Cthulhu__Shadow_of_the_Comet (esto último es el nombre del juego que debemos de cambiar por el nuestro)
Iyi script inoshanda pamwe neGog.com repository, mutambo wemitambo uko kwatichawana mazana emitambo yeGnu / Linux, yeWindows uye yeMacOS. Mazhinji acho akasununguka uye haadi mutengi saSteam kuti ashande.
Hukama kana kwete ne gog.com, iyi script inonakidza kwazvo sezvo ichibatsira kushandura mitambo kune iyo flatpak fomati. Zvimwe zvinonakidza kungave kutora mitambo yeWindows kuti iende flatpak uye iiswe nekuda kweWine, sezvo vazhinji vashandisi vane matambudziko nemaraibhurari kana vachiisa Windows mutambo paGnu / Linux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Maitiro ekushandura mitambo yeLinux kuita flatpak mapakeji
PROTON, forogo yeWINE kubva kuSteam - mu beta - inotangisa 100% yemitambo yandaive nayo paStam waini - ndakazvisunungura.
Uye kana chikumbiro icho pamwe nekumisikidza waini imwe chete - uye kwete imwe pamutambo kana chinosimudza - inowedzera zvakakodzera zviwanzo zvewaini kumutambo wega wega uye zvirinani kana ikashandisa fomati yeflakpak - pane zvatove kuyedza - zvingave zvakanaka.
Nezve kuyedza: inonzi winepak